Ọnụnọ Zelda, ọtụtụ ohere dị ka rupees na ahịhịa | Igbu egbugbu
Ọnụnọ Zelda, ọtụtụ ohere dị ka rupees na ahịhịa
Hey! Gee ntị! Taa, anyị kwadebere otu isiokwu gbasara egbugbu Zelda! Ya mere, gụọ isiokwu a iji kwadebe, ha na-ekwu na ọ dị ize ndụ ịga naanị.
1 Kedu ihe bụ Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda?
2 Dị tattoo, gịnị ka anyị nwere ike isi n'ike mmụọ nsọ?
Kedu ihe bụ Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda?
Mmalite nke saga malitere site na mbụ Nintendo console, NES, na 1986. Njikọ, ọ bụghị Zelda, ga-azọpụta Princess Zelda, ugbu a ee, site na njide nke Ganon ọjọọ. Mana maka nke a ọ ga-achịkọta iberibe 8 nke Zelda kewara Triforce nke Amamihe ka Ganon anaraghị ya.
Ma nke a, karịa ma ọ bụ obere, bụ akụkọ na-ekwughachi onwe ya n'ọtụtụ egwuregwu (ụfọdụ, dị ka Majora's Mask, were akara ọzọ): Ganon na-anwa iweghara Triforce iji merie ụwa, Zelda na Link gbalịrị izere ya. Ọ nwere ike ịdị ka atụmatụ dị mfe, mana ọ na - agbaso usoro atụmatụ nke akụkọ niile dị egwu nke Joseph Campbell kwuru banyere ya Dike nwere nnuku ihu. Ikekwe ọ bụ ya kpatara ya site na ikwughachi atụmatụ nke anyị niile webatara, saga videogame ahụ na-ejide anyị ọnyà nke ukwuu (ma na-anwa anyị ọnwụnwa na egwuregwu, ihe egwuregwu, egwu ...).
Dị tattoo, gịnị ka anyị nwere ike isi n'ike mmụọ nsọ?
Lee ị nwere nhọrọ iji kwụsị ụgbọ ala. Site na Njikọ, Zelda, Ganon ma ọ bụ onye ọzọ, dị ka eze, nke nnyefe ịchọrọ (M na-ebu otu Njikọ Njikọ Njikọ). I nwekwara ike ịdabere na ihe, dị ka mma agha ma ọ bụ Triforce. Ma ọ bụ ikekwe jikọta Triforce na ihu nke ọ bụla agwa (ha na-ekwu na mpekere ọ bụla nke Triforce na-ejikọta ya na agwa).
Were ohere inye ya mmetuta nke agba, ha di nma na iberibe dabere na egwuregwu vidio ndị a!
Ruo taa ederede nke taa. Na-eme atụmatụ ị nweta akara egbugbu Zelda? Have nwere otu? Hapụ ozi na echiche gị na mpaghara mpaghara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Echiche antgha » Ọnụnọ Zelda, ọtụtụ ohere dị ka rupees na ahịhịa
Usoro igbu egbugbu iji mara otu esi egbu egbu egbugbu
Ejiji Viking: ndị dike ka mmụọ nsọ kpalie ha